€ 303 Ho an'ny FIMI X8 SE FPV Iray | CouponBG.com
Home » Fifanarahana tapakila » [Stock EU - CZ] FIMI X8 SE FPV One Batteries Version
Fampidirana Marina ve fa mitady drone mendrika haka sary ianao, izay miaraka amin'ny fakan-tsary 4K sy vondrona lehibe hisongadinana mahafinaritra ary tsy handany $ 1000? Mety ho ilay drone tadiavinao i Xiaomi Fimi X8 SE.
Izahay iray manontolo dia mahafantatra fa ny DJI dia mitarika ny tsenan'ny drone mpanjifa, indrindra eo an-tampon'ny tsenan'ny drone sary miaraka amin'ny drôna Phantom sy Mavic. Na eo aza izany, raha sendra tsy manana fahefana ara-bola ianao ho an'ny tampon'ny drone DJI, misy safidy hafa mahatalanjona ary ny drone Xiaomi FIMI X8 SE dia ao anatin'ny lisitra.
Ny Volavola Ny famolavolana ny drone FIMI X8 SE dia tokana tanteraka izay toa totalin'ny zavatra marani-tsaina mifanaraka amin'ny andrasana. Ity drone azo fehezina ity dia misy rafitra miovaova be izay mampiavaka azy. Izy io dia manana fitaovam-piadiana maotera efatra azo aforitra izay manome fiakarana kely sy lava halavany mba hamelomana ny heriny. Ny elatra dia manome taonina iray amin'ny fisehoan'ny drone, amin'ny singa miavaka dia ny fanavaozana azo ahodina. Tamin'ny fotoana nahalavoana ny drôna dia somary lehibe kokoa noho ny telefaona finday io. Ity dia rafitra mahatalanjona sy ergonomika ho an'ny mpivahiny. Ary koa, ny mpanara-maso lavitra dia mitovy amin'ny PSP. Manasongadina ny antennas avo roa heny hatramin'ny farany. Eo amin'ny sisiny ankavia, azonao atao ny mahita bokotra herinaratra miafina ao anaty sliver. Eo ambonin'ny bokotra herinaratra no misy ilay toerana misy ny switch switch eo anelanelan'ny. Matetika izy io dia antsoina hoe maody Sports / GPS. Eo ambanin'ny bokotra herinaratra dia Smart Return amin'ny bokotra an-trano. Ambonin'ny zava-drehetra, ny gadget dia manome endrika manam-pahaizana izay maniry anao hanana azy nefa tsy mieritreritra ny fiasa momba azy.
Camera Tsy isalasalana fa ny singa fototra amin'ity drone ity dia ny fakantsary fakan-tsary mahafinaritra 4K, fitaovana kely mahavariana izay ahafahanao mahita an'izao tontolo izao ambony HD. Ity no antony iray ahazoako drôna fitiavana iray, azonao atao ny mizaha izao tontolo izao izay mety tsy hanana safidy na oviana na oviana FIMI X8 SE mahazo tombontsoa ianao hijery azy amin'ny HD mazava tsara. Ny fakan-tsary 4K dia mahazo fitoniana amin'ny alàlan'ny gimbal mekanika 3-axis izay hamafa ny karazana fanodikodinana manome anao sary sy rakipeo malefaka na dia amin'ny toe-javatra mangatsiaka aza. Miaraka amin'ny fakantsary 4K, azonao atao ny manoratra anaty 30FPS sy mandefa horonantsary mivantana mivantana amin'ny findainao izay ahafahanao manana safidy hanova sy hizara ny rakipeo amin'ny alàlan'ny media an-tserasera. Ny fakantsary dia miaraka amina sensor Sony ½.3-inch izay miaraka HDR izay hahatratra ny antsipirian'ny sary misongadina kokoa ary hanome anao fanatanterahana alokaloka tsara kokoa. Ny fakan-tsary dia mety amin'ny fakana sary mahavariana amin'ny 12MP, ny fakantsary fakantsary fotsiny dia mendrika ny vidin'ny drone.
Remote Control Mila milaza ny fijoroan'ny mpanamory lavitra aho eo amin'ireo hafa izay efa hitako, naorina tsara izy io ary mahatsapa tena tsara eo am-pelatananao. Ny fanaraha-maso rehetra dia sarotra ihany, ary manana habaka fandefasana goavana manodidina ny 5km izy, io dia faritra malaza kokoa noho ny Parrot Anafi sy ny Mavic Pro. Misy ny fifehezana ny fipetrahana, ny fiaingana, ny fakana sary sy horonan-tsary ary ny dial iray izay hamela anao hifehy ny gimbal mekanika.
Other Features Ny drone dia miaraka amin'ny bateria lipo marani-tsaina izay manome ny faharetan'ny sidina mandritra ny 30 minitra. Izy io dia mitovy amin'ny Air sy DJI Mavic. Ny fampiharana FIMI Navi dia azo atao miaraka amin'ireo gadget an'ny iOS sy Android, manana tsotra izy io hampiasa interface tsara voajanahary ary io no fampiharana manome anao fidirana ho an'ny ankamaroan'ny fisongadinana mahatalanjona miaraka amin'ny gadget.
Famaranana Ny Xiaomi FIMI X8 SE dia drone fakan-tsary mahatalanjona hahafahanao maka rakipeo sy sary mahafinaritra miaraka amin'ny fakantsary 4K. Safidy mendrika izy raha oharina amin'ireo mpifaninana lafo vidy aminy ary mahazo hevitra misongadina mitovy amin'izany ianao. Miaraka amin'ny fanavaozana ny sidina nohatsaraina sy tsotra hampiasa regulator sy fampiharana, ny automaton dia mety ho an'ireo mpanamory fiaramanidina efa za-draharaha sy tsy manana traikefa. Banggood.com no toerana mety indrindra hividianana ity drone ity amin'ny taha tsara indrindra.
€ 303 fotsiny ho an'ny FIMI X8 SE 2020 8KM FPV Miaraka amin'ny axis 3 Gimbal 4K Camera HDR Video GPS 35mins Flight Time RC Quadcopter RTF One Battery Version - Fotsy tsy misy FIMI Premium Care
Raha mila fanolorana FIMI misimisy kokoa - ETO
Ity coupon ity dia manan-kery ho an'ny EUROPE - CZ trano fanatobiana entana! Fandefasana maimaimpoana sy fandefasana haingana avy any Eropa! Hahafantatra bebe kokoa momba Banggood Warehouse sy ny fadintseranana TAX azonao vakiana ETO
[Stock EU - ES] Onda Xiaoma 31 Intel N3450 13.3 inch Quad Core 1.10GHz 4GB DDR3 64GB eMMC Intel HD Graphics 500 Win 10 Laptop An-trano HDMI Full Metal Golden Luxury Notebook 500 IPS Screen
[Tahiry UE - CZ] T10 2000W Dual Motor 23.4Ah 10-Inch E-Scooter misy seza
Tags: [Tahiry UE]FIMIRCSEX8X8SEXiaomi
Xiaomi RedmiBook Pro 14 2021 Laptop 14.0 inch 2.5K Resolution avo 100% sRGB AMD Ryzen R7-5700U 16G DDR4 3200MHz RAM 512G SSD 300nits Type-C Backlit Fingerprint Camera WiFi 6 Notebook
Ampiasao Coupon Code:BG7c12ce
AtuMan DUKA LI1 2 amin'ny 1 Dual Laser Protractor Digital Level Ruler azo averina famaritana 360 ° Arbitrary Angle Cast line refesina
Aqara ZigBee Wireless Human Body PIR Sensor Smart Home Kit Miasa miaraka amin'ny Gateway APP - 1 Pcs
Ampiasao Coupon Code:BGAQIRHK
Ampiasao Coupon Code:PromoNOCOUPON
SG 1401 1402 RTR 1/14 2.4G 4WD Fitaovana an-tsokosoko feno LED jiro RC Fiakarana fiara tsy mataho-dalana - SG-1402
Ampiasao Coupon Code:BGSG14RC